China High Efficient Cutter Head for Cutter Suction Dredge ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ | ရှည်သည်။
- ကွန်ပြူတာအရည်ဒိုင်းနမစ် (CFD) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြင့် တီထွင်ခဲ့သည်။
- မြေအမျိုးအစားတစ်ခုစီအတွက် သီးသန့်သွားများ ရရှိနိုင်သည်။
- ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန် စိတ်ကြိုက်ဖြတ်တောက်ခြင်းဖြေရှင်းနည်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
- တစ်တန် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာခြင်း။
သောင်တူးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် တူးဖော်ခြင်းနှင့် slurry ဖန်တီးခြင်းမှစတင်သည် ဖြစ်သောကြောင့် ခုတ်ထစ်စုပ်စက်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ၎င်း၏ဖြတ်စက်ခေါင်းဖြင့် အဓိကသတ်မှတ်ထားသည်။
ဘက်စုံသုံးခုတ်ထစ်ခေါင်းကို သီးခြားဧရိယာတွင် ကြုံတွေ့ရသည့် မြေဆီလွှာပေါ် မူတည်၍ ကျဉ်းမြောင်းသော သို့မဟုတ် မီးတောက်နေသော ကျောက်တုံးများ တပ်ဆင်နိုင်သည်။
ဖြတ်တောက်ထားသော အစွန်းများဖြင့် ခေါင်းဖြတ်ပါ။
RELONG ရေယာဉ်စုရှိ အသေးငယ်ဆုံးသော တူးဂျာများသည် ပါဝါအတော်လေးနည်းပြီး အများစုမှာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အသုံးပြုကြပြီး ပျက်စီးယိုယွင်းမှု အနည်းငယ်သာ ခံစားရလေ့ရှိသည်။ RELONG သည် ဤရေယာဉ်များအတွက် ဖြတ်တောက်ထားသော အစွန်းများပါသည့် ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော ဖြတ်တောက်ခေါင်းကို ပေးသည်။ ၀တ်ဆင်ပါက၊ ၎င်းတို့၏ သက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် ဂဟေဆက်အသစ် သို့မဟုတ် ရိုးရိုးအစွန်းများကို ဝယ်ယူနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ရံဖန်ရံခါသာ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
စံချိန်မီရှုးခေါင်းများအပြင်၊ RELONG သည် ခုတ်ထစ်သောင်တူးခြင်းစိန်ခေါ်မှုတိုင်းအတွက် သင်၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် အထူးရည်ရွယ်ချက်ရှိသော ဖြတ်တောက်ခေါင်းများကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
မတူညီသောမြေအမျိုးအစားများသည် မတူညီသော ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုပုံစံများကို တောင်းဆိုကြသည်။ မြေအမျိုးအစားတစ်ခုစီအတွက် တိကျသောသွားများရရှိနိုင်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါအားလုံးသည် တူညီသောအဒက်တာနှင့် ကိုက်ညီသည်-
- သစ်ဆွေး၊ သဲ နှင့် ရွှံ့စေးပျော့များအတွက် အသုံးပြုသည်။
- ကျဉ်းမြောင်းသော ငရုတ်သီးများကို သဲထုပ်များနှင့် ရွှံ့စေးများ တွင် လိမ်းပါ။
- ကောက်အမှတ်ပါသော သွားများကို ကျောက်ဆောင်အတွက် အသုံးပြုသည်။
1. Cutter ဦးခေါင်းအား ဖြတ်စက်စုပ်စက်၏ အရှေ့ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ Cutter Head သည် ခုတ်ထစ်စုပ်စက်၏ အဓိကဖွဲ့စည်းပုံများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ထုတ်လုပ်မှုပမာဏနှင့် သောင်တူးခြင်းထိရောက်မှုကို ကြီးမားစွာ ဆုံးဖြတ်ပေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
2. မြေဆီလွှာအမျိုးအစားအားလုံးအတွက် စံချိန်စံညွှန်းနှင့် စိတ်ကြိုက်တူးဖော်ခြင်းကိရိယာအစုံအလင်ကို ပေးဆောင်ရန် ဖြတ်တောက်ခြင်းများကို အမျိုးမျိုးသော သွားများနှင့် အစားထိုးနိုင်သော ဖြတ်တောက်နိုင်သော အစွန်းများဖြင့် တပ်ဆင်နိုင်သည်။
3. Multi-purpose cutter head သည် ၎င်း၏ အစားထိုးနိုင်သော သွားစနစ်ကြောင့် ဖြတ်စက် suction dredger အတွက် အသုံးအများဆုံး ဖြတ်ခေါင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို သတ်မှတ်ထားသော ဧရိယာတွင် ကြုံတွေ့ရသည့် မြေဆီလွှာပေါ်မူတည်၍ ကျဉ်းမြောင်းသော သို့မဟုတ် မီးတောက်နေသော ငရုတ်သီးများဖြင့် တပ်ဆင်နိုင်သည်။ အစားထိုးနိုင်သော သွားစနစ်သည် ရိုးရှင်းသော်လည်း ထိရောက်သောသော့ခတ်မှုစနစ်ကို အသုံးပြု၍ ဟောင်းနွမ်းသွားပြီးနောက် အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲနိုင်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ သွားများ၏အရွယ်အစားသည် လှီးဖြတ်ခေါင်း၏ အရွယ်အစားပေါ်တွင် မူတည်သည်။
နောက်တစ်ခု: သောင်တူးခြင်းအတွက် မြင့်မားသော Loads အတွက် ဂီယာဘောက်စ်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။